Iimpawu ze-Stair: intsingiselo kunye nokuqokelelwa koyilo | Ukuzoba
Iimpawu ze-Stair: ingqokelela yoyilo kunye nentsingiselo
Nat Cerezo | | Izinto kunye neeTattoos zezinto
Ileli. Into yoyilo esijongana nayo yonke imihla ebomini bethu. Sonke siyazi ukuba izinyuko lolwakhiwo olwenzelwe ngokukodwa ukunxibelelana ngeendawo ezahlukileyo eziphakamileyo. Nangona kunjalo, yintoni abantu abambalwa abaziyo ukuba yeyakhe intsingiselo kunye / okanye uphawu kwihlabathi lobugcisa bomzimba. Kwaye ii-stair tattoos zithandwa kakhulu.
Kule nqaku siza kuzinikela ekuchazeni nasekubonakaliseni intsingiselo yeetattoo. Kananjalo nokuqokelela iintlobo ezahlukeneyo zoyilo ukuze bonke abo banomdla wokubamba umvambo oneyona nto iphambili kumanqanaba emzimbeni wakho banalo lonke ulwazi oluyimfuneko ukuze baqonde kakuhle ukuba ezi tattoos ziya zisanda ngokuxhaphakileyo nezaziwayo.
1 Intsingiselo yeeTattoo zezinyuko
1.1 Ukunyuka ekukhanyisweni okanye ukwehla esihogweni
1.2 Izinyuko ezineentyatyambo ze-lotus
1.3 Izinyuko ezijikelezayo
1.4 Izinyuko ezineewotshi
1.6 Izinyuko ukuya ndawo
2 Yintoni oza kuyikhuthaza xa ukhetha uyilo
3 Iifoto zeZitebhisi zeTatoo
Intsingiselo yeeTattoo zezinyuko
Zininzi iintsingiselo ezinokubakho kwiitattoo zeleli, Kuxhomekeka ekubeni bayenyuka na, phantsi okanye nangaphandle kwezinto abahamba nazo. Phakathi kweetatto ezaziwa kakhulu ngale nto inomdla kakhulu esiyifumanayo:
Ukunyuka ekukhanyisweni okanye ukwehla esihogweni
Intsingiselo yeetosto tattoos, ngokona ngqondo iphambili, indlela ethe ngqo eya kwihlabathi elingaphaya kwelethu, zombini ezantsi kunye phezulu. Oko kukuthi, kuyakufuneka uhambe ngeleli ukuya ezulwini. Kwimeko yokunyuka kwezinyuko, okanye, ngokuchaseneyo, uye esihogweni, kwimeko yokwehla kwezinyuko. Yonke into iya kuxhomekeka kuhlobo lwenkolo esijongene nayo.
Oko kukuthi, ukuba ingqiqo apho kuhamba khona izinyuko ikwayinto ebalulekileyo yolwazi ukuze wazi ukuba le tattoo ithetha ntoni. Ke ngoko, izinyuko ezinyukayo, ngokucacileyo, zinoluvo olunxulumene nenkqubela phambili, yeenjongo zokugqibela (okanye isibhakabhaka, njengoko besesitshilo ngaphambili), zihlala zifanekiselwa kukuphela kwezitepsi, ezinokuthi zigutyungelwe Inkungu ekhanyayo, ngokungathi ibilizulu, okanye inokuba nomnyango okhokelela kwimeko entsha yobukhanyiso, umzekelo.
Ngakolunye uhlangothi, Izinyuko ezinyukayo zibonisa ukwehla esihogweni kwaye zisetyenziswa, ngaphezu kwako konke, ukukhumbula amaxesha adlulileyo apho sangena khona kwiimeko ezinzima kwaye ekubonakala ngathi akukho ndlela yokuphuma kuzo. Itattoo ingabonisa oko kwehla, umzekelo, ngezinyuko ezithobayo njengoko zisihla okanye ngezinyuko ezijikelezayo, esiza kuthetha ngazo apha ngezantsi, uphawu lweemfihlakalo kunye nokuphambana, phakathi kwabanye.
Izinyuko ezineentyatyambo ze-lotus
Ikwasisixhobo kwaye indlela yonxibelelwano nabantu abangaziwayo nabangumoyaKungenxa yoko le nto kuqhelekile ukubafumana bedibene neentyatyambo ze-lotus kunye nezinye izinto zedayi yamaBuddha. Kwimeko apho, i-staircase iya kuba yindlela ekhokelela ekukhanyeni, ekuzazini kwethu (okuyiyo kanye le ntyatyambo ifanekisela).
Kuya kufuneka sinike ingqalelo ekhethekileyo kwizinyuko zomoya ezijikelezayo.njengoko zithathwa njengophawu lwemfihlelo. Eminye yemiboniso bhanyabhanya eyintsomi yenzeka kwizinyuko zolu hlobo, umzekelo, zisetyenziselwa ukubonisa uloyiko lweendawo eziphakamileyo ezihlupheke ngumntu ophambili Vertigo, nguHitchcock, apho i-spiral, oko kukuthi, ukuma kwezitepsi ezijikelezayo, nayo idlala indima ebalulekileyo.
Imimoya, yona, zingumqondiso wotshintsho olungapheliyo, yokufa neyokuvuka, kodwa kwanokugeza kwimisebenzi emininzi.
Zezinye zeetatoo zezitepsi eziqhelekileyo nezaziwayo, kuba uphawu lwayo luhlala kusapho. Ngokwesiqhelo bamele okanye lusapho luphela, isibini esitshatileyo, umntwana ... eyamkela le ntsingiselo, ihlala inyuka ingabi phantsi.
Amanqanaba anokuqwalaselwa njengabazala beleli zokuphila ubomi bonke. Njengokuba ezi zihlala zihambelana neentsingiselo eziyimfihlakalo kunye nokuphakama, kuba njengoko besitshilo ukuba bobabini bayindlela eya ezulwini okanye ekukhanyeni nasesihogweni, ileli inentsingiselo ethe kratya. Ziluphawu lokufezekisa injongo, kodwa le njongo iya kuba lula, kwaye ayizukuba luhambo olude lokomoya. Ngokuchasene noko, iileli zinokuqwalaselwa njengaleyo ityhilwayo incinci oyifunayo ngexesha elithile ukufezekisa oko uzimisele ukukwenza.
Izinyuko ukuya ndawo
Izitepsi eziya naphi na, njengezitepsi ezijikelezayo, uphawu lwemfihlakalo, kodwa zinokufuzisela ukudideka okanye umbono wobomiKuba izitepusi kulindeleke ukuba zikhokelele kwenye indawo, ukuze ziye kwindawo ekuyiwa kuyo. Iitattoo zesiteji ezikhokelela ndawo akukho ndawo zihlala zibonisa olo luvo xa siziva ngathi asiyonxalenye yayo nantoni, kwaye ubomi abunanjongo okanye busikhokelela naphina.
Ngokuchanekileyo ubabalo lwe tattoo kukubamba uphawu olunxulumene nenkolo, njengezinyuko ezikhokelela ezulwini, kwaye uyijike ukuze ibe nentsingiselo eyahluke ngokupheleleyo.
Yintoni oza kuyikhuthaza xa ukhetha uyilo
Njengoko sibonile kulo lonke inqaku, nangona iintsingiselo zeetattoos zikaninzi kwaye zahlukahlukene, zonke zinemvelaphi efanayo: yokomoya neyimfihlakalo. Kungenxa yoko le nto ingezizo ii-tatoo ezisetyenziselwa ukwenziwa ngombala. Umnyama nomhlophe unika umnwe wokudlulela ngaphaya kwemfihlelo kunye nemfihlakalo, ukulungele ukudibana nentsingiselo ye tattoo, ihlala isisitayile esifanelekileyo kunye nemigca entle, kunye nobukhulu obubalulekileyo, ngakumbi ukuba buhamba nezinye izinto.
kunjalo, Izitayile eziluhlobo lwesitayile esiya ngokuya zisiba yinto eqhelekileyo, njengoko zinokumangalisa kakhulu. Ngemigca emihle kakhulu kunye nobukhulu obuncinci kunobo bangaphambili, ezi tattoos zigcina umnyama nomhlophe, kodwa zihlala zinokudityaniswa nezinye izinto zeprosaic kunye ne-surreal, ezinje ngeengcango, iiplanethi ...
Ngakolunye uhlangothi, Uyilo olwahluke ngokupheleleyo luxhaphake kwii-tatoos zeleli. Kule migca, imigca eshinyeneyo ihlala isetyenziswa ngakumbi, kwaye umbala awuqhelekanga kangako. Ngapha koko, uyilo lupholile ngakumbi kwisitayile sendabuko ukunika ukubamba nje okuqhelekileyo.
Kwigalari ye-stair tattoos ehamba neli nqaku ungabonisana neentlobo ezahlukeneyo zoyilo, zombini izinyuko eziqhelekileyo kunye nezinyuko ezijikelezayo okanye ezijikelezayo. Njengokuba ubona, baninzi abantu ababhejayo ekulingiseni izitepsi isiphelo sazo ngumnyango wokungena kubomi basemva kokufa.
Siyathemba ukuba sikuphembelele ngolu luhlu lwe tattoo lubonisa intsingiselo. Khawusixelele, unayo iitatoo zale ndlela? Kufuzisela ntoni kuwe? Ngaba ukhethe i-escola eyiyo, ileli yoyilo lwesiko okanye, ngokuchaseneyo, into eyahluke ngokupheleleyo neyantlandlolo?
Iifoto zeZitebhisi zeTatoo
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuzoba » Iindidi zeetattoos » Izinto kunye neeTattoos zezinto » Iimpawu ze-Stair: ingqokelela yoyilo kunye nentsingiselo
Iitattoo zenyanga: zonke iintsingiselo kunye noyilo
Ukuphulukana nobunzima obukhulu kuchaphazela iiTattoos: Le mifanekiso ityhila